Apple kaThixo iPhone X Ubamba Ixabiso layo Kulunge Ngakumbi Nawuphi iPhone Previous - China Gracebestbuy International
Apple kaThixo iPhone X Ubamba Ixabiso layo Kulunge Ngakumbi Nawuphi iPhone Edlulileyo
Ukuba ukhangela ukuthenga iPhone angagcini ixabiso layo, khangela ngakumbi kwe Apple kaThixo iPhone X.
Kuphononongo lwakutsha nje, inkampani ukumiswa B-Stock yahlola leyo iPhone wenza umsebenzi ibalaseleyo babambelele ixabiso layo. Beza iPhone X phezu Ngokuhlala 85% sayo yoqobo emarikeni yesibini. Iinkampani ukuba uthenga le iPhone X ninzi ukuba abuthengise obo nefoni bazizuzela kuyo 75% of ixabiso layo ngemiyinge emincinci, B-Stock wafumanisa, ngokutsho 9to5Mac, ezafumana ikopi isifundo.
Apple wakhulula iPhone yayo X kunyaka ophelileyo kunye tag eliphezulu ixabiso nto yaphinda olugxunyekwe efowuni inkampani. Isiseko iPhone X imodeli lixabisa $ 999 kunye nenguqulelo kunye yokubeka uya kuba $ 1.149. I-B-Stock data icebisa iPhone X ixabisa ubuncinane $ 849,15 e zokuthengiswa.
Smartphones musa ngokuqhelekileyo ukubamba ixabiso wabo kakuhle. Iimpawu ezintsha, amacandelo eziphuculweyo, kunye okhuphisana zinomtsalane bakholisa ukuqhuba ixabiso labo phantsi kakhulu. IPhones Apple kaThixo ngokufanayo baye balahlekelwa ixabiso, kodwa bakholisa ukubamba up ngcono kakhulu. Ngokutsho 9to5Mac, data B-Stock sibonisa iPhone X iye umise irekhodi entsha ngokubamba ngaphezu naliphi na ixabiso layo ezinye iPhone ezivenkileni.
Na efunyanisiweyo iindaba kusenokwenzeka ezilungileyo kwiinkampani ukuba bafumane iPhones babesebenzisa okanye wabuya. Kwakhona iindaba ezilungileyo umntu onemoto iPhone X kwaye uceba ukwenza oko, ngenxa isixhobo esitsha kulo nyaka. Ukuba akukho okunye, iyakuba kuhamba indlela ende nokuvalwa nendleko iPhone entsha.
ixesha Post: Jul-30-2018